Dhaloota galfata nyaate – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhaloota galfata nyaate
Dhaloota galfata nyaate
Via Raajii Guddataa, Caamsaa 28, 2019
Miseensonni WBO biyya Ertiraa turan gaara Oromiyaatti deebi’an 1300 keessaa gariin humna poolisiitti makaman gariin jireenya dhunfaa jiraanna jechuudhaan hawaasatti makaman. Kanneen biyya keessa waamicha araaraan gowwomfamnis mooraa haaromsa xollayyitti naqaman warreen kun hunduu kallattii fi al kallattiin miidhaman
A. Kanneen Ertiraa irraa dhufan
WBO Eritrea irraa yeroo deebi’an
Kan pooliisiitti makaman : yeroo ammaa leenjii jedhamuun kaampii Adaamaatti erga ugguramanii turanii booda gara Godinalee Oromiyaatti ramadamanii jiru . Warreen kunis muxannoo hin qabdan jechuun hidhamaa eeguu irratti ramadamaniiru.
Kanneen humna addatti makaman :
Garii ammoo humna addatti makaman lafoo ta’uun wBO sakataatu jechuun dura buusuun du’aaf isaan saaxilaa jiru . Fkn Kan giddugaleessa Oromiyaatti raawwatame keessaa tokko . Ajajoonni humna adda humna kana akka halagaatti qophixxeessee ilaalaa jira .
B. Kanneen hawwasatti makaman
Sirbituu WBO kan ummatati deebi’an hujii dhuunfa eegalan keessa tokkoo, haa ta’u malee rakko jireenya keessa jirachuun isaa himamaa jira.
Godinaaleetti deebi’aa ni qubachiifamtu jedhaman . Haa ta’u malee gara godinaaleetti yemmuu deebi’an isaan qubachiisu miti doorsisaa fi hidhaatu isaan simate. Jireenya maatiitti hirkatanii jiraachuu egalan sanas hidhatoota mootummaan maatii fi sabbontota isaan gargaaran waan dorsiisaniif bakka jiraatani irraa baqatanii naannoo garaagaraatti rakkata jiru . Jaal Gamteessaa Oromoo Kan jedhamu jireenya Hadha’aa akkanaa baqatee osoo gara Somaaliyaa godaanu rasaasa Somaaleen rukutame lubbuun darbee. Gariin namatti hirkatuun Jiraataa jiru .
C. Kanneen yaada araara jedhamu fudhatanii Mooraa Xollaay jiran:
WBO Xoollaay keessatti akkanati oola.
WBO Xoollaay galchan suummii nyaachisan
Kanneen kun summiin faalamanii dhukubaaf saaxilamuu qofaa miti . Rakkoolee hin mul’annee heedduun hiraarfamaa jiru . Uffata bosonaa uffatanii dhufan uffatanii jiru hanga amma, leenjii isiiniif kennamee qubattu jedhamanis hanga amma waan raawwate hin jiru . Koree teekniikaa fi abbootii Gadaa irraa dhorkamanii humna fedeeraalaan giddirfamaa jiru . Kanneen hojii tikaaf dhimma itti ba’uuf garee keessatti ijaaruun bakka garaagaraatti bobbaafaman haa jiratan malee cuftuu callisanii mooraatti rakkataa jiru . Leenjiin kennemus barnoota siyaasaa itoophiyaa guddoo ijaaruu fi sagantaa siyaasaa ADWUI dha. Egaa warreen kun Carraan isaanii maalii? Kennen kaan ammoo mooraa keessa ba’uun qabsoo hidhannootti deebi’aa jiru . Kunis dubbii fala dhabe dha .
Loltoonni G7 fi ONLF gara biyyaa deebi’an warreen humna nageenyaatti makaman aangeeffamanii saba isaanii deggeeraa, warreen hawaasatti makaman ogummaa isaaniin akka jireenya jalqaban Mootummaan naannoolee projeektii addatti qopheessee deggeera jira . Kan WBO maaf adda ta’ee?
Egaa ijoolleen kun jiruu isaanii lakkisuun falmaa hadhaa’aa gammojjii keessatti rakkataa ba’an Oromoo dhaaf Oromoon ammoo deebiin isaa kana ta’uu hin mallee.
Kanaafuu mootummaan ilaalcha siyaasaaf jedha yoo miidhee Oromoon ijoollee Oromoo kanaaf kabajaa gootummaa kennee gargaaru malee.
ABOn ummata Oromoo fi Gumii abbootii Gadaa tti kenne , isaan ammoo mootummaa Naannoo Oromiyaatti kennan, Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo Feedeeraalaatti kennee amma warra Abbaa dhabe ta’an…… Oromoon galfata hin nyaanneeree?
Dhaloonnis galfata nyaate, mootummanis siyaasaaf isaan gatee, waaqaxi Oromoo ammoo isaan hin gatiin.
Karaa biraa, WBOn waamicha Jawar Mohammed fi Bekele Gerba dide, hardha injifannoo gudaa argateen ummata isaa ijaaraa ijaaramaa jira. Waraana PM Abiy Ahmed ittin dhaadatuu cabsaa jira. Bilisummaa Oromo fi Oromiya sadarkaa arginee hin beekne seensisaa jira. Via WBO!
Dhaloota Qubee Hawwisoo Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Gujii fi Boorana Dhaloota Qubee Hawwisoo Waraana Bilisummaa…
Jeequmsa Yuunvarsitii Dabra Maarqositti uumameen ‘barataan tokko ajjeefame’
አማራ ካልተወከለ፣ ማን ተወከለ?